यी निर्माता निर्देशक जो अनमोलकै कारण डुबे, किन अनप्रोफेसनल व्यवहार गर्दै हिँड्छन् अनमोल ? – OSNepal
यी निर्माता निर्देशक जो अनमोलकै कारण डुबे, किन अनप्रोफेसनल व्यवहार गर्दै हिँड्छन् अनमोल ?
काठमाडौं , ४ कात्तिक-अनमोल केसी कलिउडका महँगा अभिनेतामध्येका हुन् । उनकाे पारिश्रमिकको पनि चर्चा हुने गर्छ । ‘होस्टेल’ बाट उदाएका अनमोलले सुरुवाती दिनमा धेरै निर्मातालाई मुनाफा दिलाए । केही फिल्मलाई बिर्सिने हो भने उनले अभिनय गरेका फिल्मले निर्मातालाई निराश बनाएको छैन ।